November | 2011 | Myanmar My Always
ရဟန်းတရားမရသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးများအတွက် ဖတ်စာ
အရှင်စန္ဒောဘာသာစာရနှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့၊ ဘုန်းကြီးရဲ့စာက အင်မတန်ရှည်လို့ လုံးစေ့ပါဒ်စေ့ မဖတ်အားသေးပါ။ အပြေးဖတ်ပြီး အဓိကကျတာကိုပဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပတ္တနိကုစ္စနကံဆောင်ထိုက်တဲ့ အပြစ် ရှစ်ပါးကို သေသေချာချာကြည့်ပါ။ ဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်နေပါသလဲ။ လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ ဦးအောင်ဆန်းဦးက ကျုပ်လိုတောင် အလေးထားပြီး လှည့် ကြည့်မှာမဟုတ်ပါ။ ၂။ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးတွေကို မကြိုက်တာနဲ့ အစိုးရလူဖြစ်ရရင် ညွန့်ရွှေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရ လူပေါ့။ ဒီလိုစွပ်စွဲတာကိုက ရဟန်း သံဃာအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သက်သေခံတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မေ့ နေပုံပေါက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဦးနုတို့က ဘုန်းကြီးတွေ … Continue reading →
နိုင် ငံရေးဘုန်းကြီးအလိုမရှိ
TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010 မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်) ဘုန်းကြီးနဲ့ဘီး (၂) (နဲနဲ ခပ်စပ်စပ်ကလေးတွယ်လိုက်တယ်) ပြန်မရေး မဖြေရှင်းပြန်ရင်လဲ “ဟာ- – ဦးပညာဇောတ တွယ်ထည့်လိုက်တာ ဦးညွန့်ရွှေတစ်ယောက် အင်တာနက်ကနေ ပျောက်ပြီး မှောက်သွားပြီလို့ နုံနဲ့သူတွေက လက်ခမောင်းခတ်ကြပေလိမ့်မယ်။ ဦးပညာဇောတတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ မယောင်ရာ ဆီလူးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေအားလုံးကို ဗုဒ္ဓမျက်နှာတော်ကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး သံဝေဂ (အများစုကတော့ ယူနိုင်မယ်မထင်ပါ၊ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးဘုန်းကြီးတွေကိုသာ ဆိုလိုပါတယ်) ယူနိုင်အောင်၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို လေနဲ့ဝမ်းနဲ့မကွဲပဲ သံယောင်ပဲလိုက်နေသူတွေလဲ ဗဟုသုတဖြစ်အောင်၊ … Continue reading →
မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်) ဘုန်းကြီးနဲ့ဘီး အမြင်မတော် (၁) ဒေါ်စုအိမ်ပြင်တဲ့ကိစ္စကို ကန့်ကွက်တာကို ကျနော်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်၊ ဦးအောင်ဆန်းဦးအနေနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်း ထင်တယ်။ မောင်နှစ်မနှစ်ဦးကြားမှာ တခြားမကျေနပ်တာတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုလောက်တောင် ယိုယွင်းနေတဲ့ အိမ်ကို ပြင်ဆင်တာမျိုးကိုတော့ (ခုထိ နှစ်ဦးပိုင်တယ်လို့ ယူဆရင်) အိမ်ပြင်ခငွေတောင် အချိုးကျစိုက်သင့်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ အစိုးရကလဲ ဒီကိစ္စမှာ ဘက်မ လိုက်သင့်ဘူးလို့ ကျနော် ထင်တယ်။ ဥပဒေပညာရှင်မဟုတ်လို့ ပုဒ်မတပ်ပြီး မကိုးကားနိုင်ပေမဲ့ ကြားဖူးတာကတော့ နိုင်ငံခြားသားဟာ မြန်မာပြည်က မြေယာ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ … Continue reading →
Suu Kyi centered politics
Saturday, May 1, 2010 Nyunt Shwe Myanmar politics in general is hero-worship politics. Late Prof. Maung Maung Gyi, late Prof. Mya Maung, and Prof. Joseph Silverstein said the same thing in their books. The NLD politic is Suu-centered politics. This … Continue reading →
International Correspondent Posted: July 15, 2009 10:39 PM By Virginia M. Moncrieff That old chestnut question “name six people you would love to have to dinner” usually holds no surprises. The guest list from many liberal, forward-thinking (and may I … Continue reading →
http://articles.latimes.com/2010/may/26/opinion/la-oe-frankel-burma-20100526/2 The opposition movement would do better to participate in upcoming parliamentary elections. Protest from the sidelines rarely works. May 26, 2010| Matthew Frankel On the face of it, it’s easy to support the courageous decision of the beleaguered Burmese … Continue reading →
Tuesday, June 1, 2010 Aung San Suu Kyi: She Is Bad for Myanmar- The West should stop fixating on her http://www.doublex.com/section/aung-san-suu-kyi-she-bad-myanmar?page=0,0 • Posted: Tuesday, May 19, 2009 8:00am By Kerry Howley The first time John Yettaw,a53-year-old father … Continue reading →